चीनले नेपाल, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा के गर्दैछ ? जसबाट भारत आ'तंकित छ - Himali Patrika
चीनले नेपाल, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा के गर्दैछ ? जसबाट भारत आ’तंकित छ
हिमाली पत्रिका १० भाद्र २०७७, 7:22 am
काठमाडौं। पछिल्लो समय चीनले नेपाल, बंगलादेश र अफगानिस्तानमा गरिरहेका गतिविधि भारतको लागि ख’तरनाक भएको भन्दै भारतका कूटनैतिक विश्लेषकहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । भारतीय विश्लेषकहरुले चीनले भारतलाई चौतर्फी घे राबन्दीमा पार्दै यस क्षेत्रमा भारतको वैकल्पिक महाशक्तिको रुपमा उदाउन थालेको टिप्पणी गरेका छन् ।
भारतमा कूटनैतिक विषयमा तीन दशकभन्दा बढी पत्रकारिता गरेकी र द प्रिन्टकी राष्ट्रिय तथा रणनैतिक मामिलाकी सम्पादक ज्योती मल्होत्राले आफ्नै अखबार द प्रिन्टमा लेखेकी छिन् ‘चीन भारतीय सीमाभित्र मात्र छैन उसले भारतलाइ वरिपरीबाट घेरिरहेको छ । उत्तर पश्चिममा अफगानिस्तान, उत्तरमा नेपालदेखि पूर्वमा बंगलादेश, भिनियाँहरुले दक्षिण एसियामा प्रभाव मात्र बढाइरहेका छैनन् उनीहरु यहाँ प्रसिद्ध शक्ति बन्ने निकट छन् ।’
ज्योति लेख्छिन् ‘२४ घण्टाअघि मात्र भारतले क्षेत्रीय महत्वाकांक्षामा धक्का व्यहोरेको छ । पाकिस्तानी विदेशमन्त्री शाह महमुद कुरैशीले पाकिस्तानका लागि चीनका विशेष दूत लिउ जियानलाई देशको १९ वर्ष लामो यु’द्ध अन्त्य गर्न सहयोगका लागि निम्त्याए ।
कुरैशीले मुल्लाह अब्दुल गनी बारादर नेतृत्वको तालिबानी डेलिगेशनलाई पनि भेट्दैछन् जसलाई पाकिस्तानले ८ वर्षसम्म जेलमा राखेर २०१८ मा रिहा गरेको थियो । यो भेटले लिउसँगको भेटको लागि वातावरण बनाउनेछ ।’
पूर्वमा बंगलादेशमा पनि चीनले प्रधानमन्त्री शेख हसिना र उनको सेनालाई बेइजिङ र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धबारे पुनरावलोकन गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । कैयौं विमानस्थलको सम्झौता, (हालै सिलेटको दोस्रो टर्मिनल बनाउने ठेक्का चीनले पाएको छ) रक्षा सम्झौता जसमा कक्स बजारमा आधारित अल्ट्रा मोडर्न पनडुब्बी समेत सामेल छ, बंगलादेशी उत्पादनमा ९७ प्रतिशत कर छुट लगायतले चीनलाई बंगलादेशको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार मात्र नभएर सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता बनाएको छ ।
मल्होत्रा अगाडि लेख्छिन् ‘नेपालमा हालै एक रिपोर्टले चीनले नेपालका दोलखा, गोरखा, दार्चुला, हुम्ला, सिन्धुपाल्चोक, संखुवासभा र रसुवा गरी ७ जिल्लामा ठूलो भूमि अ’तिक्रमण गरेको खुलासा गरेको थियो । तर, नेपालले यो दावीलाई बलियोसँग खण्डन गर्यो र अखबारले यो रिपोर्ट प्रकाशित गरेकोमा माफी माग्यो ।
बेइजिङले काठमाडौंलाई दुवै देशले सगरमाथाको सर्वेक्षण र नक्सांकन गर्ने गरी २०१९ मा भएको ड्राफ्ट सहमतिलाई लिखित रुपमा सम्झौता गरेर हस्ताक्षर गर्न पनि दबाब दिइरहेको छ ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश सचिव हर्ष श्रृंगलालाई यसै हप्ता विशेष विमानमार्फत शान्ति र मित्रताको सन्देशसहित बंगलादेश पठाएका थिए । तर, जब विदेश सचिव श्रृंगलाको विमान अवतरण भयो कुनै पनि बरिष्ठ अधिकारीहरु उनलाई स्वागत गर्न आएनन् । अर्कोतर्फ गएको जूनमा जब १० जना चिनियाँ डाक्टरको टोली बंगलादेशलाई कोरोनाभाइरससँग लड्नको लागि सघाउन ढाका पुगे, विदेशमन्त्री एके अब्दुल मोमेन उनीहरुलाई स्वागत गर्न विमानस्थल पुगे ।
बंगलादेशी मिडियाका अनुसार अहिले गएका विदेश सचिव श्रृंगलालाई पनि प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले घण्टौंसम्म प्रतिक्षा गराइन् । उनीहरुको भेटको कुनै फोटो मिडियामा रिलिज गरिएनन् ।
मिडियासम्म पुगेको एकमात्र फोटो भनेको श्रृंगलाले गत मार्चमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई भेट्दाको फोटो थियो । प्रधानमन्त्री हसिनाको कार्यालयले पनि केही पूर्वानुमान गर्न सकिने कुराहरुबाहेक यसबारे बंगलादेशी मिडियालाई पनि विस्तृतमा केही भनेन ।
श्रृंगला चुपचाप ढाका गए र चुपचाप फर्किए । यदि यो हसिनाको कुटनैतिक प्रतिउत्तर थियो भने यो चर्को थियो र प्रस्ट थियो । तथ्य के हो भने श्रृंगला ढाकासँग परिचित छन् किनकि उनी २०१६ देखि २०१९ सम्म त्यहाँ हाइ कमिश्नर थिए र उनी त्यहाँको राजनैतिक वृत्तसँग परिचित थिए । उनलाई बेवास्ता गरिनु व्यक्तिगत थिएन ।
यसको एउटा मुख्य कारण गृहमन्त्री अमित शाहले २०१८ मा दिएको अभिव्यक्ति थियो । उनले त्यतिबेला असमका गैरकानुनी आप्रवासीहरुलाई धमिराजस्तै भनेका थिए जसले स्थानीयको रोजगारी खोसेका थिए । २०१९ मा चुनावी अभियानमा शाहले पश्चिम बंगालमा सोही कुरा दोहोर्याए र उनले भाजपा शक्तिमा आएका यसप्रकारका घुसखोरहरुलाई बंगालको खाडीमा फ्याँकिदिने बताए ।
१९७१ देखि भारतसँग निकट रहेको अवामी लिग पार्टीकी प्रधानमन्त्रीको लागि शाहको यो अभिव्यक्ति पटक्कै पाच्य थिएन । यसले भारतप्रति ‌बंगलादेशको सत्ताधारी पार्टीको स्नेहलाई धरापमा पार्यो ।
२०१६ मा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङ बंगलादेश आउँदा उनको २४ बिलियन डलरको उदारताले हसिना लोभिइसकेकी थिइन् । जब उनी २०१९ को मध्यमा चीन भ्रमणमा गइन् प्रधानमन्त्री लि केक्लियाङले चीनको बेल्ट एण्ड रोडलाई बंगलादेशको विकास रणनीतिसँग समन्वय गर्ने बाचा गरे । सिलेट विमानस्थलको ठेक्का यही वर्षको अप्रिलमा आयो ।
यसअघि चीनले टिस्टा नदीको व्यवस्थापनको लागि झण्डै १ अर्ब डलरको विशाल परियोजनामा लगानीका लागि सहमत भयो जुन नदी उत्तरु बंगलादेशबाट बग्दै बंगलादेशसम्म जान्छ ।
मल्होत्रा अगाडि लेख्छिन् ‘वास्तवमै भारतले बंगलादेशलाई गुमाइसकेको छैन । चीनले बंगलादेशलाई जतिसुकै राम्रा कुराहरु अफर गरेको भए पनि अहिलेसम्म भारतले बंगलादेशलाई गुमाएको छैन । अझै पनि कैयौं सम्बन्धका परियोजनाहरु छन् जसमा सबैभन्दा पछिल्लो कोलकातादेखि चित्तागोंग बन्दरगाह हुँदै अगरतलासम्म कार्गो संचालनको परियोजना छ ।
यस्तै भारतले अफगानिस्तानलाई पनि गुमाइसकेको छैन । ठूल्दाइ चीनको सहयोगमा तालिबानसँग सम्झौताको प्रयास गरिरहेको भए पनि पाकिस्तान खेलमा धेरै पछाडि छ । यद्यपि कुनै समय पूरै आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको छिमेकीसँगको सम्बन्ध आफ्नो हातबाट चिप्लिन सक्नेप्रति नयाँ दिल्ली चिन्तित छ ।
निश्चित रुपमा यसको साँचो प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हातमा छ । उनले छिमेकको नेतृत्वसँग राजनैतिक सम्बन्ध बलियो बनाउनुको साथै आफ्नो पार्टी भाजपाका अनियन्त्रित प्रवृत्तिमाथि निगरानी राख्नुपर्छ । के उनी यो गर्न सक्षम होलान् ?’